U-Nieves Concostrina: ibali elifanayo, enye indlela yokuxelelwa | Uncwadi lweNdaba
Nieves Concostrina: iincwadi
Isicatshulwa nguNieves Concostrina
U-Nieves Concostrina ngumbhali waseMadrid owaziwayo ngendlela yakhe yokuqala yokubalisa iziganeko zembali. Ukususela ekusekweni kwayo, injongo yayo ibikukubonisa iziganeko ngendlela ehlekisayo, ukushiya ecaleni iingcamango ezisoloko zisetyenziswa kwiitekisi ezifundisayo. Isampulu yale yincwadi yakhe yamva nje: Imbali esengxakini (2021), enokonwatyelwa nguye nawuphi na umntu omdala, nangona engowohlobo loncwadi lwabantwana.
Ngaphezulu kweshumi leminyaka kwinkalo yoncwadi, upapashe iincwadi ezisithoba. Yima geqe phakathi kwezi: uluthuli wena (2009) kunye Amabali amancinci embali (2009). Ngokukwanjalo, uye wavuna umsebenzi wobuntatheli obugqwesileyo kuyo yonke iminyaka yakhe engama-40 yamava kunomathotholo nakumabonakude, ngokusebenza kwakhe ufumene amabhaso abalulekileyo, afana ne: Villa de Madrid yobuntatheli kushicilelo olubhaliweyo (1998) kunye no-Ondas ngolwazi olungcono. unyango ngo-2016.
1 Iincwadi zikaNieves Concostrina
1.1 Uluthuli (2009)
1.2 Amabali amancinci embali: i-anecdotes, i-nonsense, i-algar adas kunye ne-mamarrachadas yoluntu (2009)
1.3 Imizobo yokufa koLuntu (2012)
1.4 ISan Quintín kunye namanye amabali amancinane eMbali adityaniswa (2012)
1.6 Imbali eNgxaki: 5 Amanqaku, 4 aBalaseleyo, kunye neCress (2021)
2 Malunga nombhali, uNieves Concostrina
2.1 Amabhaso anikwe uNieves Concostrina
Iincwadi zikaNieves Concostrina
uluthuli wena (2009)
Yincwadi enomxholo ongaqhelekanga, kuhle ingxelo yeziganeko ekudlule kuzo izidumbu zabantu abathile iziganeko ezibalulekileyo embalini. Lo mbono uthile, kwangaphambili, wenza umsebenzi ube yimagnethi kwabanomdla. Phakathi kwamaphepha ayo kukho intaphane yamabali, adityaniswe ngokwezi zahluko zisixhenxe zilandelayo:
Ifilosofi kunye neeleta
Ezopolitiko, ii-chevrons kunye ne-adventure
Showbiz, rock kunye nemidlalo
Enye embi kwaye enye ilungile
Isahluko sokugqibela sibalasele kwezinye ngomxholo waso; Yahlulahlulwe yangamacandelo ali-19 kwaye inamabali anika umdla kakhulu. Phakathi kwazo kukho: “Ukuxhwilwa kwezidumbu ”, “Uqhawulo-mtshato lwasemva kokufa”, “I-mafia iyabulala”, "I-Jeweled dead", "Funerary Gazapos" kunye "nokwenziwa kwakhona".
Kwintshayelelo yomdlalo, umbhali Wavakalisa oku: “Ngale ncwadi ndinenjongo yokubonisa kuphela ukuba ukufa (kwabanye) kunokuba mnandi, kugqithise okanye kube mnandi njengobomi. Kwaye wanga uThixo, okanye nabani na, angasibamba avume ”. Yintoni egqithisile, Wachaza indlela awayeyiphuhlisa ngayo le ncwadi phantse iminyaka elishumi kwaye amava akhe obuntatheli ayebalulekile.
Phakathi kwamabali esinokuwafumana:
"UAlexander I, umbusi ofileyo nolahlekileyo" (1777-1825)
"UYohane XXIII, ogqibeleleyo waqholwa" (1881 - 1963)
"Pythagoras, indoda efileyo enenkohliso" (ngenkulungwane yesi-XNUMX ukuya kweyesi-XNUMX BC)
"Umama okhohlisayo kaFrancisco Pizarro" (1471? - 1541)
"Umngcwabo" cache "Marilyn Monroe" (1926 - 1962)
"UPablo Escobar, ukukhutshwa engcwabeni okungahambi kakuhle" (1949-1993)
Amabali amancinci embali: i-anecdotes, ububhanxa, i-algarias kunye nezidenge zoluntu (2009)
Le ncwadi - eyesithathu evela eMadrid - yanikezelwa emva kwempumelelo ye uluthuli wena. Kuzo zonke izahluko zayo ze-13, uConcostrina eqhula kwaye kabuhlungu uchaza iziganeko ezininzi eziphazamisa ngokwenene.. Phakathi kwamabali ahlukeneyo axelwayo: "i-Algaradas", "Uthando, imicimbi yothando kunye ne-shenanigans", "i-Mamarrachadas", "imibuzo ye-Mundane" kunye ne "Revoltosos".
Njengomsebenzi wakhe wangaphambili, umbhali wayefuna ukubonisa ezinye iziganeko kwimbali yoluntu ngendlela eyahlukileyo, ngaphandle kwe "academicism" eninzi, ukuze afikelele kubafundi ngokufanelekileyo. Kwintshayelelo yakhe wathi: “Ezi zizivubeko nje ezincinci ezenzelwe kuphela ukuba luncedo ukuvelisa umdla kunye nokutyhala, ngethemba, ukusela kwimithombo engaphezulu yokufunda ”.
Amabali amancinci ...
Imizekeliso yokufa koluntu (2012)
Ngumsebenzi wesine wombhali. Yayipapashwa kwangaphambili njenge uluthuli wena II, njengoko ilandela umgca ofanayo wombhalo we-homonymous ka-2009. Phakathi kweziganeko ezingalindelekanga edlula kuzo imizimba ye-protagonist yi-subplots ezonwabisayo egcwele uburharha bophawu lombhali. Ukongeza, iziqendu ezihlekisayo zincediswa yimifanekiso yeForges.
Amanye amabali esinokuwafumana ngala:
"UKhakhayi lohambo olujikelezayo lukaJoseph Haydn"
"Ikhakhayi elizidlayo likaFrancisco de Quevedo"
"Ibala elihle likaComrade Lenin"
"Dorothy Parker Uthuli"
"UCésar Borgia ocinezelekileyo"
Ukufa okuboniswayo kwe...
Elinye laseSan Quintín kunye namanye amabali amancinci eMbali adityaniswa (2012)
Yingqokelela yeziganeko—iimpazamo noburhalarhume—ezenzeka ukususela oko ukubhalwayo kwavela ngokusesikweni kwiminyaka engama-5000 eyadlulayo, kwavula ithuba imbali eyaziwayo. Ngokwahlukileyo kwezinye iincwadi ezimbini, le inikela ngeemeko ezenzekayo “ebomini.”
Ushicilelo oluhlekisayo lombhali luyazingisa kwibali ngalinye. Abalinganiswa abaphambili bakwimigangatho eyahlukeneyo yoluntu kunye nemimandla yemizamo yabantu, ukwenzela ukuba phakathi kwemigca yencwadi iya kuba: abezopolitiko, abadumileyo, i-nuncios, ii-hierarchs kunye namanani asebukhosini. Kubalulekile ukuqaphela ukuba, nangona imiba yembali eyaziwa ngokubanzi ixoxwa, okubhaliweyo kunomxholo ongapapashwanga oko kuya kumangalisa ngaphezu kwesinye.
Le ncwadi inezahluko ezili-16 apho uninzi lwamabali anomxholo owahlukileyo usasazwayo. Siya kungqina: iimfazwe, imilo yeecawa, udushe ezixekweni ... La ngamabali athile:
"I-Empire State, uphahla lwaseNew York"
"UClaudica owasindayo uClaudio"
"Santiago, umqokeleli werhafu onganelisekiyo"
Enye yeSan ...
Kukuqala kombhali kudidi lwengxelo yoncwadi. Le noveli ibalisa ngebali likanina, u-Antonia, umfazi owafika emhlabeni xa iSpain yayihamba ngexesha elinzima. - ekuqaleni kweminyaka yee-1930. Ngalo msebenzi, uConcostrina wayefuna ukuhlawula bonke abafazi abalwela ubomi obungcono kubantwana babo ngexesha leMfazwe yaseSpain kunye neminyaka elandelayo.
Umbhali, iphepha nephepha, ichaza obuninzi bobunzima usapho lwakhe olwadlula kubo ngethuba ekhulisa umama wakhe, nendlela oku, emva koko, yadlula i ngokuqhubekayo ubungqina bokuba ubomi wamazisa. Njengesiqhelo kumbhali, ibali liphuhliswe buburharha kwanokuchukumisa okuhlekisayo, oku ukuze kuthambise kancinane iimeko zokuphalaza igazi ekwakufuneka abalise.
Imbali eNgxaki: 5 Amanqaku abalulekileyo, ama-4 aBalaseleyo, kunye neCress (2021)
Yincwadi yokugqibela kaConcostrina. Ingxelo emfutshane yobomi babantu abalishumi abadumileyo abaphawula imbali inikwe kwisicatshulwa.. Umbhali ugxininisa imizabalazo yeengcamango zomlinganiswa oyintloko ngamnye kwiimeko ezahlukeneyo ekwakufuneka baphumelele kuzo. UMiguel Ángel, uMarie Curie, uCervantes, Oscar Wilde, U-Isabel de Braganza kunye noFernando VII bambalwa nje abalinganiswa abafunyenwe kwimigca yabo.
Umsebenzi-ogcina isimbo esihlekisayo sombhali-ngowabantwana abancinci / abancinci. Kudliwanondlebe no-Efe, uConcostrina wathi: «Xa ndibhala iskripthi somlingiswa, andicingi ukuba yinto ehlekisayo, ndijonge nje amabali anomdla«. Ingxelo nganye incediswa ngemizobo ka-Alba Medina Perucha.
Amanye amabali aqukiweyo kule ncwadi ngala:
"Indlela uMichelangelo agqiba ngayo ukuba nguyise kaDavide, umfanekiso ongazange awuqale"
"Cervantes ekuthinjweni kwakhe"
"U-Isabel de Berganza umdali we-El Prado"
Malunga nombhali, uNieves Concostrina
U-Nieves Concostrina Villarreal wazalwa ngoLwesibini, ngo-Agasti 1, 1961 eMadrid, eSpain. El Idayari 16 Yayisisikolo sakhe sobuntatheli, apho wasebenza ukusuka ngo-1982 ukuya ku-1997. Kamva, waqhubeka nomsebenzi wakhe kwezinye imidiya kamabonwakude, ezifana UAntena 3. Kwakhona wakhazimla kwibala likanomathotholo nge: "Polvo Eres" ngu Unomathotholo 5 kwaye "ayiyiyo nayiphi na imini" ngo Unomathotholo 1.
Ngo-2005 uye wabonisa umsebenzi wakhe wokuqala njengombhali: ... kwaye uya kuba luthuli, Incwadi yeefoto ze-epitaph. Ukusukela ngoko wapapasha ezinye iincwadi ezisibhozo, ezahlulwe ngesimbo esingaqhelekanga kunye noburharha. Ezinye izicatshulwa zombhali:
IiQuijostorias ezincinci (2016)
Ixesha elidlulileyo (2018)
Amabhaso anikwe uNieves Concostrina
Ukuqatshelwa koluntu akuzange kube yinto engaqhelekanga kumbhali. Nanga amanye amabhaso awafumeneyo:
2005 XX Andalusia ibhaso leJournalism, kwindlela yayo yerediyo, evela kwiJunta de Andalucía
2010 Paradores de España Ibhaso leBali eliFutshane laMazwe ngaMazwe
Ngowama-2010 iKumkani yaseSpain iMbasa yaMazwe ngaMazwe yeRadio Journalism
Ngowama-2010 iMikrofoni yeGolide eyawongwa yiSpanish Federation yeMibutho yeRadio kunye nomabonakude
Imbasa yowama-2021 yabaseTyhini abaPhambili kudidi lweNkcubeko, enikezelwa yiManyano yabaseTyhini abaPhambili
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Nieves Concostrina: iincwadi
Eduardo Mendoza usuku lokuzalwa. Ukukhethwa kwamaqhekeza kunye namabinzana
Iincwadi ezithetha ngeZazi. Ukhetho lwamabali kunye namabali